Olana… Mampifanolana | NewsMada
Par Taratra sur 27/08/2016
Betsaka loatra ny olana eto ary zary lasa mampifanolana sy miteraka fifandrafiana mihitsy aza. Tsy mahavaha izany anefa ireo tompon’andraikitra… Mianona amin’ny valin-teny boribory ny mpitantana na mijanona amin’ny fampanantenana fotsiny ihany fa handray fepetra na koa filazana fa efa an-dalana ny raharaha. Firifiry izao ireo raharaha zary valina fotsiny hoe efa mandeha ny famotorana ? Eo, ohatra, ny « Raharaha faty olona tetsy Mahamasina », ny fiparitahan’ny basy tonga eny an-tanan’ny jiolahy, ny fahavakisan’ny BC etsy Anosy ka nahavery ny antontan-taratasy momba ny fakana an-keriny, ny filazana fa handraisana fepetra ireo olon-tsotra manao fanamiana miaramila… Tsy misy tohiny… Olana avokoa izany.
Etsy andaniny, efa mitrandraka harena an-kibon’ny tany any Mananjary ireo Sinoa nefa tsy eken’ny mponina. Hiandry ny olana hiitatra tahaka ny ahoana vao handray andraikitra ny mpitantana isan-tokony ? Mbola olana, hampifanolana any ifotony koa izany.
Io indray koa izao fa ho etsy Analakely ireo vazaha sy ireo hanara-dia azy anio, hanao diabe am-pilaminana, haneho fiaraha-mientana manoloana ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana eto. Ho olana ary hahatonga adihevitra sy hampifanolana izany. Rehefa inona sy iza na ahoana no afaka hanao izany ? Tsy nisy fangatahana alalana ny hetsika natao tany Sainte-Marie sy Mahajanga momba izany tamin’ity herinandro ity. Hanao ahoana ny eto an-tanàna ?
Mbola olana, tsy ahitam-panafana ifangaroan’ny famendrofendroana ny fandaminana sy fanadiovana eto an-dRenivohitra. Aoka tsy hihemotra na hanao afo-mololo ny mpitantana fa handeha hatramin’ny farany… Tsy hanavahana na iza na iza. Tsy ho voavahan’ny eto an-tanàna samirery koa anefa izany fa mitaky vahaolana miaraka amin’ny mpitantanana foibe, mba tsy ho olana, hampifanolana sy hifampiandrasana kendry tohina… Zaran’ny sasany aza mantsy tsy hilamina io ary efa nisy nikasa hampifangaro izany amin’ny resaka politika mihitsy aza.
Olana tsy voavaha fa mahazo vahana ary mampitaraina ny mpanakanto ny fanaovana hosoka na piraty ny sanganasan’izy ireo. Mitaraina izy ireo ary voatery manaiky ho ara-dalàna ny piraty ka mampidina ny vidin’ny hatsembohany ambany mihitsy… Satria afo-mololo ny nambara fa borigady hiady amin’io asa ratsy io… Firifiry moa ireo mpitandro filaminana mandalo sy manao fisafoana na koa miandry ireo mpanao politika hanao hetsika eo, saingy mitazam-potsiny ?
Olana lehibe, tsy mbola voavaha, nefa miverimberina ny delestazy. Efa mahazatra ny valin-teny… Efa nampifanolana sy niteraka hetsika samihafa teo amin’ny mpanjifa io, saingy miverimberina tahaka ny olan’ny vatsim-pianaran’ny mpianatra eny Ankatso…
Samy manana ny olany avokoa ny sehatra sy ny ambaratonga samihafa any… Olana avokoa izany. Ahina hitambatra izany ka hampifanolana ny vahoaka amin’ny mpitantana, tsy ho ela…